China abavelisi beConical Drill kunye nabathengisi | Mingtaishun
1. Inyathelo lokomba imigqomo ilungile xa kusombiwa kwaye kwandiswe imingxunya emininzi kumacandelo amancinci eeshiti zesinyithi, imibhobho, iplexiglass, iiplastiki, ukhuni ukuya kubukhulu be-5mm.
3. Iindidi zobubanzi bemingxunya zinokugrunjwa kusetyenziswa isixhobo esinye kuphela.
4.Ukusika umda ongatshatanga: kudala imingxunya ejikelezileyo yentsimbi, iplastiki, ukhuni kunye nezinye izinto ezingacacanga ngaphandle kokubetha iziko.
5. Isantya esiphezulu sentsimbi sinika ubomi obulungileyo kunye nokuchaneka okuphezulu.
6. I-Round Shank: ilingana kakhulu neentlobo zezixhobo zamandla kwaye inikezela ngokuchaneka okuphezulu.
7. Yenzelwe ukujikeleza kuphela.
Ngomgangatho ophezulu, ixabiso elifanelekileyo, ukuhanjiswa ngexesha kunye neenkonzo ezenziwe ngokwezifiso nezenzelwe wena ukunceda abathengi bafezekise iinjongo zabo ngempumelelo, inkampani yethu ifumene indumiso kuzo zombini nakwiimarike zangaphandle. Abathengi bamkelekile ukuba banxibelelane nathi.
Ngenxa esemgangathweni kunye namaxabiso afanelekileyo, iimveliso zethu zithunyelwa kumazwe angaphezu kwe-10 kunye nemimandla. Sijonge phambili ekusebenzisaneni nabo bonke abathengi basekhaya nakwamanye amazwe. Ngaphezu koko, ukwaneliseka kwabathengi kukusukela kwethu ngonaphakade.
Iqela lethu lazi kakuhle iimfuno zentengiso kumazwe ahlukeneyo, kwaye liyakwazi ukubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni ezifanelekileyo ngamaxabiso aphezulu kwiimarike ezahlukeneyo. Inkampani yethu sele imisele iqela lobuchule, eliyilo kunye nelinoxanduva lokuphuhlisa abathengi ngemigaqo yokuphumelela emininzi.
Egqithileyo I-MTS HRC55 Solid Carbide Twist Drill (i-3D)
Okulandelayo: Carbide Metal Faka Kuba Milling / Ivula RPMT1003MO-TT-DH122
I-MTS HRC55 i-3 Flute Chamfering Drill